Qaxootiga Falastiin - Land Of Punt
Intii lagu jiray Dagaalkii Falastiin ee 1948, qiyaastii 85% (720,000 oo qof) oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee reer Falastiin waxa ay noqdeen Israa’iil ayaa laga saaray guryahooda, iyagoo u cararaya Daanta Galbeed, Marinka Qaza, Lubnaan, Syria, iyo Jordan.
Ku raadso dadka qaxootiga ah ee Falastiin meelaha ay ka mid yihiin Jordan
QODOBBADA MUHIIMKA AHIntii lagu jiray Dagaalkii Falastiin ee 1948, wejigii koowaad ee Dagaalkii Israel iyo Israel ee 1948, 85% shacabka reer Falastiin ee Reer Falastiin waxay ka carareen guryahooda wixii loogu magac daray Falastiin Falastiin sanadki 1948.Dood kulul ayaa ka dhexeysa taariikhyahanada iyo siyaasiyiinta sababihii ku soo baxay Baxrayn, maqaalka dooddani waxay ku saabasan tahay sheegashada reer Falastiin dhulkooda.Cayrinta reer Falastiin ayaa tan iyo markii ay taariikhyahanada qaar ku tilmaameen nadiifin qowmiyadeed, halka kuwo kale ay ku murmayaan xukunkan.Barakacayaasha ka socda Falastiin, ee loo yaqaan qaxootiga Falastiin, ayaa degay xeryo qaxooti reer Falastiin ah oo ku baahsan dunida carabta, iyadoo badankood ay u carareen Daanta Galbeed, Marinka Qaza, Lubnaan, Syria, iyo Jordan.Inta badan ummadaha carabta ayaa u diiday jinsiyadda qaxootiga reer Falastiin, marka laga reebo dalka Jordan, halkaasoo intooda badani ay leeyihiin dhalasho ama xuquuq u dhiganta muwaadiniinta.Daraasad la sameeyay 2007, Amnesty International ayaa dhalleeceysay “xaalad xun oo bulsho iyo mid dhaqaale” oo ka dhex jirta Falastiiniyiinta Lubnaan.
SHURUUDAHA MUHIIMKA AHBaxrayntii Falastiin ee 1948Sidoo kale loo yaqaan Nakba, dhacdadani waxay dhacday markii in kabadan 700,000 oo reer Falastiin ah ay carareen ama laga eryay guryahooda intii lagu jiray dagaalkii Falastiin ee 1948.qaxootiQof barakac ah oo lagu qasbay inuu ka gudbo xuduudaha qaranka oo aan si nabadgelyo ah ugu noqon karin waddankiisa sababa la xiriira cadaadis xagga jinsiyadda, diinta, dhalashada, xubin ka ahaanshaha koox bulsheed gaar ah ama ra’yi siyaasadeed.Wadada QasaDhul yar oo iskiis u xukumaa Falastiin oo ku taal xeebta bari ee Badda Mediterranean-ka, waxay xuduud la leedahay Masar dhanka koonfur-galbeed 6,8 mayl iyo Israa’iil dhanka bari iyo waqooyi ee xadka 32-mile ah. Iyada oo ay weheliso Daanta Galbeed, waxay ka kooban tahay dhulalkii ay sheegteen reer Falastiin inay yihiin Gobolka Falastiin.Daanta GalbeedDhul aan ciriiri ku jirin oo u dhow xeebta Badda Mediterranean ee Galbeedka Aasiya, taas oo sameysay inta badan dhulalka Falastiin. Waxay xuduudo la wadaagtaa dhinaca Webi Urdun dhankasta oo ah Webiga Urdun.
Baxrayntii Falastiin Ee 1948
Intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 1947-1948 Dagaalkii Muhiimka ahaa ee Falastiin iyo Dagaalkii 1948-kii iyo Israaiil ee daba socday, ku dhawaad 750,000 reer falastiin ah (85% dadweynaha) ayaa ka qaxay ama laga saaray guryahooda, ku dhawaad 1.2 milyan oo Carab ah oo ku noolaa waajibaadkii hore ee Ingiriiska. Falastiin. Dhacdadan waxaa loo yaqaanay Nakba (Carabi masiibo ah ama “musiibo”).
Tiradaasi kuma aysan soo darin Falastiiniyiin barakacay gudaha Israel ay haysato. In kabadan 400 tuulo Carab ah iyo ku dhawaad 10 tuulo oo Yahuud ah iyo xaafado ayaa laga dejiyay inta lagu gudajiray dagaalkii carbeed iyo Israel, inta badan muddadii 1948. Sida ku xusan qiyaaso ku saleysan tirakoobka hore, tirada guud ee dadka muslimiinta ah ee Falastiin waxay ahayd 1,143,336 1947 dagaalkii kadib. 156,000 Carab ayaa ku hadhay Israel oo waxay noqdeen muwaadin Israa’iil.
Sababaha ka bixitaanku waa mowduuc isafgaranwaa oo ka dhaxaysa taariikhyahannada. Waxyaabaha ku lug leh waxaa ka mid ah horumarka militariga Yuhuuda, burburka tuulooyinka carabta, dagaal nafsi ah, iyo cabsi laga qabo xasuuq kale oo maleeshiyaadka Siiriya ka dib xasuuqii Deir Yassin, oo sababay in dad badani ay ka baxaan argagax; amarada eriga tooska ah ee masuuliyiinta Israel; iskaa u-saarida iskaa ah ee fasalada caafimaadka badan; dumin hoggaanka Falastiin iyo amarada daadinta carabta; iyo rabitaan la’aanta ah in lagu noolaado xukunka Yahuudda.
Sanadihii dambe, waxaa soo baxay sharciyo taxane ah oo ay maamushay dowladi ugu horeysay ee Israa’iil ka hor istaagtay in Carabtu ku noqdaan guryahooda ama sheegtaan hantidooda. Intooda badan waxay ahaayeen qaxooti, sidoo kale carruurtoodii. Cayrinta reer Falastiin ayaa tan iyo markii ay taariikhyahanada qaar ku tilmaameen nadiifin qowmiyadeed, halka kuwo kale ay ku murmayaan xukunkan.Dhibaatada qaxootiga reer Falastiin iyo doodda ku saabsan xaquuqda Falastiin ee soo laabashada ayaa iyaguna ah arrimaha ugu waaweyn ee khilaafka carabta iyo Israel. Falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda ayaa sameeyay banaanbaxyo sanadle ah iyo xuska 15-ka May sanad walba, oo loogu magac daray “Maalinta Nakba.” Caannimada iyo tirada kaqeybgalayaasha mudaaharaadyadan Nakba ee sannadlaha ah way kala duwanaayeen waqti ka dib.Baxsashada Falastiin: Qaxootiga reer Falastiin ee ka tagaya guryahooda hore ee Galbeedka, Oktoobar – Noofembar 1948Nolosha Kadib BaxsashadaBarakacay Carab Falastiin, oo loo yaqaan qaxootiga Falastiin, waxaa la dejiyey xeryaha qaxootiga Falastiin ee ku yaal dunida carabta oo dhan. Intooda badan waxay u carareen Daanta Galbeed, Marinka Qaza, Lubnaan, Suuriya, iyo Jordan. Qaramada Midoobay waxay u asaastay UNRWA sidii hay’ad samafal iyo hay’ad horumarineed oo loo xilsaaray inay gargaar bini’aadannimo siiso qaxootiga reer Falastiin. Wadamada carabta waxay diidaan inay nuugaan qaxootiga reer Falastiin, halkii ay ku hayn lahaayeen xeryaha qaxootiga iyagoo ku adkaystay in loo ogolaado inay soo laabtaan.
Qaxootinimada ayaa sidoo kale loo gudbiyey farcankoodii, kuwaas oo sidoo kale loo diidey dhalashada waddammada Carabta marka laga reebo Jordan. Jaamacadda Carabtu waxay faraysay xubnaheeda inay diidaan dhalashada Falastiin “inay ka fogaadaan kala dirista aqoonsigooda ayna ilaashadaan xuquuqdooda ku laabashada waddankooda.” In ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa weli ku nool 58 xero qaxooti oo la aqoonsan yahay, halka in ka badan 5 milyan oo Falastiiniyiin ah ay ku nool yihiin meel ka baxsan Israel iyo dhulalka reer Falastiin.In kabadan 2 milyan oo qaxooti reer Falastiin ah oo diiwaangashan ayaa ku nool Jordan. Intooda badan qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan Jordan, laakiin aan dhammaantood ahayn, ayaa haysta dhalasho buuxda. Boqolkiiba qaxootiga reer Falastiin ee ku nool xeryaha qaxootiga kuwa ku nool xeryaha ka baxsan waa kuwa ugu hooseeya dhammaan howlaha UNRWA. Qaxootiga reer Falastiin waa loo ogol yahay inay galaan adeegyada bulshada iyo daryeelka caafimaadka, taasina waxay keentay, in xeryaha qaxootiga ay noqdaan kuwa u eg sida xaafadaha magaalada oo liita marka loo eego xeryaha qaxootiga. Inta badan qaxootiga reer Falastiin waxay ka guureen xeryaha iyagoo u guuray qaybaha kale ee dalka. Kaddib qabsashadii reer galbeedka ee Israa’iil 1967, Jordan waxay ka laabatay dhalashada kumanaan reer Falastiin ah si ay uga hor-istaagto isku day kasta oo si rasmi ah looga dejinayo Daanta Galbeed ee Jordan.
100,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa u cararay Lubnaan sababta oo ah dagaalkii Carab-1948 ee 1948 loomana oggola in la soo celiyo. Ilaa Janaayo 2015, waxaa jira 462,669 qaxooti diiwaangashan oo ku sugan Lubnaan.Daraasad la sameeyay 2007, Amnesty International ayaa dhalleeceysay “xaalad xun oo bulsho iyo mid dhaqaale” oo ka dhex jirta Falastiiniyiinta Lubnaan.
Ilaa 2005, Falastiiniyiinta waa laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan in kabadan 70 shaqooyin maxaa yeelay ma haystaan dhalashada Lubnaan, laakiin tan ayaa markii dambe la yareeyay ilaa 20 sida laga soo bilaabo 2007 ka dib sharciyada xorriyadda. Sannadkii 2010, Falastiiniyiinta waxaa lasiiyay xuquuq la mid ah tan ay u shaqeeyaan sida ajaanibta kale ee dalka ku sugan.
Lubnaan waxay dhalasho siisay qiyaastii 50,000 oo qaxooti reer Falastiin ah oo Falastiiniyiin ah intii u dhaxeysay sannadihii 1950-meeyadii iyo 1960-yadii. Bartamihii 1990-meeyadii, qiyaastii 60,000 oo qaxooti muslimiin Shiite ah ayaa la siiyay dhalasho. Tani waxay dhalisay mudaaharaad ka yimid mas’uuliyiinta Maronite, taasoo keentay in dhalashada la siiyo dhammaan qaxootiga Masiixiyiinta ah ee aan horey u haysan dhalashada.